Telecom kabinetra fampangatsiahana mpamatsy sy orinasa - China Telecom kabinetra fampangatsiahana Manufacturers
BlackShields ivelan'ny trano Integrated kabinetra dia natao ho an'ny finday nozaraina toby fiantsonan'ny, izay afaka mahafeno ny fangatahana ny ivelany fifandraisana tontolo iainana sy ny fametrahana. Ny famatsiana herinaratra, ny bateria, ny fitaovana fizarana tariby (ODF), ny fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana (Air conditioner / heat exchanger) dia azo ampidirina ao anaty kabinetra mba hamenoana ny fangatahan'ny mpanjifa ho fivarotana tokana.
BlackShields HC Combo Air conditioner dia natao ho vahaolana mitsitsy angovo amin'ny fifehezana ny toetr'andro ao amin'ny kabinetra amin'ny tontolo anatiny sy ivelany sarotra. Integrated AC Air conditioner miaraka amin'ny DC Thermosiphon Heat exchanger, dia mamaha ny olana amin'ny hafanana amin'ny kabinetra anatiny / ivelany ary hahatratra ny fahombiazan'ny angovo ambony indrindra.
BlackShields HM andian-dahatsoratra DC Thermosiphon Heat exchanger dia natao hifehezana ny toetr'andro ao amin'ny kabinetra anatiny / ivelany amin'ny tontolo anatiny sy ivelany sarotra. Izy io dia rafitra fampangatsiahana passive izay mampiasa ny angovo manova dingana mba hampangatsiaka ny ao anaty kabinetra. Izy io dia mamaha tsara ny olana amin'ny hafanana amin'ny kabinetra ivelany ary ampiasaina betsaka amin'ny kabinetra anatiny sy ivelany ary fefy misy fitaovana elektronika saro-pady.
Ity fitaovana ity dia mampiasa tanteraka ny fahasamihafana amin'ny hafanana anatiny sy ivelany. Ny mari-pana ao anatiny dia mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny fampiasana mahomby amin'ny evaporation refrigerant. Ny fifanakalozam-panafana passive dia mifototra amin'ny convection voajanahary, izay mivezivezy ranon-javatra ao amin'ny faritra mitsangana mihidy loop tsy mila paompy mahazatra na compressor.
Fanakalozana hafanana ho an'ny kabinetra Telecom
BlackShields HE andiany Heat exchanger dia natao ho toy ny vahaolana fampangatsiahana passive amin'ny fanaraha-maso ny toetry ny kabinetra anatiny / ivelany amin'ny tontolo anatiny sy ivelany sarotra. Mampiasa ny hafanan'ny rivotra ivelany izy io, manakalo azy amin'ny recuperator counter flow mahomby ary noho izany dia mampangatsiatsiaka ny rivotra anatiny ao anatin'ny kabinetra miteraka tadivavarana mihidy ao anatiny. Izy io dia mamaha tsara ny olana amin'ny hafanana amin'ny kabinetra ivelany ary ampiasaina betsaka amin'ny kabinetra anatiny sy ivelany ary fefy misy fitaovana elektronika saro-pady.
BlackShields TC TEC Peltier vata fampangatsiahana ho an'ny kabinetra dia natao ho an'ny fampangatsiahana kabinetra anatiny / ivelany amin'ny fanamby tontolo anatiny sy ivelany. Mampiasa ny teknolojia thermoelectric ary natao ho an'ny famatsiana 48V DC. Afaka manala ny hafanana be loatra amin'ny fitaovana elektronika toy ny batteries amin'ny fefy kely izy io ary safidy tsara ho an'ny fampangatsiahana ny efitranon'ny bateria.
Ny Air Conditioner BlackShields DC dia natao hifehezana ny toetran'ny fitaovana amin'ireo toerana ivelan'ny tambajotra miaraka amin'ny tontolo anatiny sy ivelany sarotra. Miaraka amin'ny compressor DC marina sy mpankafy DC, dia mamaha ny olana amin'ny hafanana amin'ny kabinetra anatiny / ivelany izy io ary safidy tsara ho an'ny toby misy herinaratra azo havaozina na hery Hybrid ao amin'ny tranokala ivelan'ny grid.
BlackShields AC Series Air conditioner dia natao hifehezana ny toetran'ny kabinetra telecom amin'ny tontolo iainana anatiny sy ivelany sarotra. Miaraka amin'ny lakan-drivotra fohy sy fikorianan'ny rivotra miparitaka tsara, dia mamaha ny olana amin'ny hafanana amin'ny kabinetra anatiny / ivelany izany ary safidy tsara ho an'ny fampiharana telecom.